Ranbir-Alia, DeepVeer, Nickyanka Iyo Lamaanayaasha 2018 Jaceylkoda Ka Dhabeyeen Iyo Kuwa Shaaciyeen (+Sawiro) – Filimside.net
Ranbir-Alia, DeepVeer, Nickyanka Iyo Lamaanayaasha 2018 Jaceylkoda Ka Dhabeyeen Iyo Kuwa Shaaciyeen (+Sawiro)
Sanadkii 2018 ee soo jiray mudada dheer markaan waa gabo gabo kaliya ilaa 4 maalmod ayaa ka dhiman waxaana la guda gali doonaa sanad cusub (2019) jadwal cusub, shaqo cusub iyo waliba la kulanka dad cusub.
Marka aan ka hadalno Bollywoodka sanadkaan sanad u wanaagsan ayuu ahaa sida guud balse dad gaar ah sanad wanaagsan uma ahen dad gaar ahna sanad wanaagsan ayuu u ahaa.
Bollywoodka macaash weyn aye ka dhargeen sanadkaan sido kalena qasaaro iyo jab xoogana waxuu kasoo gaaray dhanka Khans-ka oo mid walba hal film la yimid lacago badana lumiyay.
Waxaa kaloo sanadkaan la argay xidigo caan ah oo la fadeexestay fara xumeena lagu eedeyay waxaa kaloo la arkay shaqsiyaad caan ah oo geeriyoodeen, shaqsiyaad caan ah oo guursadeen iyo waliba shaqsiyaad caan ah oo caruur loo dhalay.
Sanadkaan 2018 Bollywoodka xiriir waaweyn ayaa ka rumoway sido kalena kuwa kalena shaaca aye ka qaadmeen sidaa aawged maqaalkan waxaan ku kala saari doona xidigaha xiriirkoda guur oga dhabeyeen iyo kuwa shaaca ka qaadeen jaceylkooda.
Liiskan xidigo caan ah ayaa soo galayaan kuwaaso qaarkood is guursadeen waana arin kale oo u gaar ah 2018 oo la arkay arimo u gaar ah Bollywoodka halkaan hoose kaga bogo magacyada iyo sawirad xidigahan.
Priyanka Chopra Iyo Nick Jonas: wey is guursadeen
Deepika Padukone iyo Ranver Singh: wey is guursaden
Sonam Kapoor Iyo Anand Ahuja: wey is guursadeen
Ranbir Kapoor iyo Alia Bhatt: shaaca aye ka qaaden xiriirkoda
Varun Dhawan iyo Natasha Dalal: shaaca aye ka qaaden xiriirkoda
Arjun Kapoor iyo Malaika Arora: shaaca aye ka qaaden xiriirkoda
Waxaa Aqrisay 329